Izindaba - Ukuchazwa kweDoor Jambs
I-Composite Door Jamb
Ukuchazwa kwe-Door Jambs
Sula amaJambs: Amafreyimu eminyango yezinkuni zemvelo ngaphandle kwamajoyinti noma amafindo.
I-Corner Seal Pad: ingxenye encane, evame ukwenziwa ngezinto eziqinile, esetshenziselwa ukuvala amanzi ukuthi angene phakathi komphetho womnyango nezinsimbi, ezincikene nebhasikidi elingezansi.
Di-eadbolt: I-latch esetshenziselwa ukuvikela umnyango uvaliwe, i-latch iqhutshwa isuka emnyango iye kumamukeli ku-jamb noma kuhlaka.
Qeda Seal Pad: Ucezu lwamagwebu avaliwe, olucishe lube yi-1/16-intshi ubukhulu, obunjengephrofayili ye-sill, luboshwe phakathi kwe-sill ne-jamb ukuvala ukuhlangana.
Uzimele: Emihlanganweni yomnyango, amalungu e-perimeter phezulu nasezinhlangothini, lapho umnyango ukhonjiswe khona futhi unamathiselwe. Bona i-jamb.
Inhloko, iNhloko Jamb: Ifreyimu ephezulu enezingqimba yomhlangano womnyango.
Jamb: Ingxenye yozimele ezime mpo yohlelo lomnyango.
Kisiza: I-slot elincanyana lisikwe laba nengxenye nge-molder noma ama-saw blade. I-Weatherstrip efakwe kuma-kerfs ahlukaniswe nezinsimbi zomnyango.
Latch: Iphini noma ibhawodi elilayishwa entwasahlobo, ngokuvamile eliyingxenye yendlela yokukhiya, futhi lifaka isokhethi noma isiqeshana esitsheni somnyango, sigcina umnyango uvaliwe.
Prehung: Umnyango ohlanganiswe ohlakeni (i-jamb) nge-sill, i-weatherstripping nama-hinge futhi ulungele ukufakwa kuvuleke kanzima.
Isiteleka: Ingxenye yensimbi enembobo yelokhi yomnyango, nobuso obugobile ngakho-ke isiqhebezo esilayishwe entwasahlobo siyayithinta lapho ivalwa. Iziteleka zilingana nodaka ezigxivwini zomnyango futhi ziboshwe ngezikulufo.
Ibhuthi: Igama elisetshenziselwa ingxenye yenjoloba ezansi noma ekugcineni kwaphezulu kwe-astragal, efaka uphawu ekugcineni nocingo lomnyango noma isill.
Boss, Isikulufa Boss: Isici esivumela ukufakwa kwesikulufa. Abaphathi bezikulufu kuyizici zamafreyimu epulasitiki abunjiwe nama-sill emnyango we-aluminium.
Ibhokisi Linozimele: Iyunithi lomnyango ne-sidelite elenziwe njengamayunithi ahlukene, enamakhanda nezinsimbi ezihlukene. Iminyango eyenziwe ngohlaka ihlanganiswe namabhokisi ezinhlaka ezinamabhokisi.
I-Sill eqhubekayo: I-sill yeyunithi yomnyango ne-sidelite enezingxenyana zobubanzi obugcwele phezulu nangaphansi, nokuthunyelwe kwangaphakathi okuhlukanisa ama-sidelites kuphaneli lomnyango.
Cove Ukubumba: Ingcezu encane yomugqa ebunjiwe yokhuni, evame ukwakhiwa ngobuso obukhethiwe, esetshenziselwa ukusika nokubophela iphaneli ohlakeni.
I-Doorlite: Umhlangano wohlaka lwengilazi nengilazi, othi uma ulingene emnyango emgodini owakhiwe noma osikiwe, wakhe umnyango ovulekayo ngengilazi.
Isandiso Unit: Iphaneli lomnyango elihleliwe eline-lite egcwele ingilazi, elincikene nomnyango wepatio wamaphaneli amabili, ukwenza umnyango womnyango ube umnyango wamaphaneli amathathu.
Umunwe Joint: Indlela yokujoyina izigaba ezimfushane zesitoko sebhodi ndawonye, ​​ukuphela kuze kube sekupheleni ukwenza isitoko esinde. Izingxenye zomnyango nozimele zivame ukwenziwa kusetshenziswa isitoko sikaphayini esihlanganiswe ngomunwe.
Glazing: Izinto ezinwebeka ezisetshenziselwa ukufaka ingilazi ohlakeni.
Ingibe: Amapuleti ensimbi anephini yensimbi eyindilinga ebopha onqenqemeni lomnyango nohlaka lomnyango ukuvumela umnyango ukuba ungene
I-hinge Stile: Umphetho oqondile wobude obugcwele bomnyango, ohlangothini noma onqenqemeni lomnyango oncamela kuhlaka lwawo ngamahinji.
Akusebenzi: Ithemu lephaneli lomnyango elilungiswe kuzimele zalo. Amapaneli omnyango angasebenzi awananyathiselwe futhi awasebenzi.
I-Lite: Ukuhlanganiswa kwengilazi nohlaka oluzungezile, oluhlanganiselwe emnyango efektri.
Multiple Isandiso Unit: Emihlanganweni yeminyango yepatio, ipaneli yomnyango engaguquki kufreyimu ehlukile, kuhlanganiswe onqenqemeni kuyunithi lomnyango wepatio ukwengeza elinye ipaneli lengilazi ekufakweni.
Ama-Muntins: Imigoqo ehlukanisayo emile futhi ivundlile, enika umnyango umnyango ukubukeka okunama-paned amaningi. Zingaba yingxenye yamafreyimu ama-lite, ngaphandle kwengilazi, noma phakathi kwengilazi.
Isitimela: Kumaphaneli eminyango afakwe ngci, ingxenye, eyenziwe ngokhuni noma into ehlanganisiwe, egijima ngaphakathi kwenhlangano, enqenqemeni eliphezulu nangaphezulu. Eminyango e-stile nejantshi, izingcezu ezivundlile emaphethelweni aphezulu nangaphansi, nasemaphoyinti aphakathi nendawo, axhuma futhi abeke phakathi kwezitaki.
Ukuvula Okumubi: Ukuvulwa okwakhiwe kahle odongeni okwamukela iyunithi lomnyango noma iwindi.
Umkhondo Wesikrini: Isici sethala lomnyango noma ikhanda lozimele elihlinzeka ngendlu nomgijimi wama-roller, ukuvumela iphaneli lesikrini ukuthi lishelele ngapha nangapha emnyango.
Sill: Isisekelo somkhawulo wohlaka lomnyango osebenza phansi komnyango ukuvala umoya namanzi.
Isilayidi Bolt: Ingxenye ye-astragal phezulu noma ezansi, ebopha amakhanda wohlaka nezinsimbi zamaphaneli eminyango engenziwanga avaliwe.
I-Transom: Inhlangano yengilazi ebunjiwe ibekwe ngaphezulu kwento yomnyango.
Ezokuthutha Isiqeshana: Ucezu lwensimbi olusetshenziselwa ukubopha okwesikhashana umhlangano womnyango we-prehung uvaliwe ukuze uphathwe futhi uhanjiswe, ogcina indawo efanelekile yepaneli lomnyango kuhlaka.
Isikhathi Iposi: Dec-03-2020
I-170-2800 Viking Way, Richmond, BC V6V 1N5
SENZA IZIMPAHLA ZAYO IMINYANGO YAMANDLA.